सफल जीवन चाहनुहुन्छ ? सफल जीवनका लागी जान्नै पर्ने कुराहरु (भिडियोसहित) - ज्ञानविज्ञान
समय एउटा वेग वा गति हो जो निरन्तर आफ्नै हिसावले अगाडि बढिरहेको हुन्छ । न हामीले यसलाई रोक्न सक्दछौं न त यसलाई छेक्न सक्दछौं । यो आफ्नै गतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ । हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि समयअनुसार चल्नर्ुपर्दछ । यदि मलाई कसैले जीवनको सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा र अनमोल कुरा के हो भनी सोध्यो भने मैले त्यसको उत्तरमा सबैभन्दा महत्व र अनमोल कुरा समय हो भन्नेछु ।
समय कसैको वशमा छैन, कसैको इच्छाले रोकिने र पर्खिने गर्दैन एकपटक बितेको समय फेरि कहिल्यै फर्किएर आउ“दैन । समयअनुसार सबै चिज परिवर्तन हुन्छन् । जस्तै बालक जवान हुन्छ, जवान बृद्ध हुन्छ, यो प्रकृतिको नियम हो । समयलाई चिनेर हामी समयअनुसार अगाडि बढ्न सक्नर्ुपर्दछ ।
समयलाई नचिनेर हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यौं भने भविष्यमा हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं । समयलाई चिन्ने र समयानुकूल चल्नसक्ने व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । समयको कदर नगर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन र त्यस्तो व्यक्तिको जीवनको कुनै अर्थ पनि रहँदैन ।
जीवन संघर्षौ संर्घष्ाले भरिएको हुन्छ, यसलाई पार गर्न समयको सही सदुपयोगको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहन्छ । समयले हरेक मानिसलाई अगाडि बढ्ने मौका दिएको हुन्छ हामीले त्यो मौकाको दुरुपयोग गर्‍यौं भने हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं । अहिले म समयको बारेमा लेख्दैछु एकछिनपछि समयले मलाई के गराउँछ र कहाँ पुर्‍याउँछ केही ठेगान छैन । समयका पलपलका क्षणहरु फरक फरक तरीकमाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
हामी आजका स्कूले विद्यार्थी हामीले अहिलेको समयलाई सही तरीकाले उपयोग गर्न सक्यौं भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । यसको सही उपयोग गर्न सिक्नर्ुपर्दछ । कसैले पनि समयलाई चुनौती दिन सक्दैन, अल्छिपना समयको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । “समय आउँछ पर्खिदैन बगेको खोला फर्किदैन” यो उक्तिलाई मनन् गरी सही समयमा सही काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल हुन्छ ।
यही समयलाई चिन्न सकेनौं भने अन्धकार हुन्छ । समयको एक क्षण पनि महत्वपर्ूण्ा हुन्छ यसलाई चिनेर ठीक-ठीक समयमा हामी चल्न सक्नर्ुपर्दछ । एक क्षणको ढिलाइले हाम्रो गन्तव्यको यात्रा छुट्न सक्छ ।
ठीक समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा मानिसको ज्यान गुम्न सक्छ । विद्यार्थी ठीक समयमा जाँचको बेला उपस्थित नहुँदा जाँच दिन नपाई उसको वर्षदनको पढाइ वर्वाद हुनसक्छ । जागिरे ठीक समयमा आफ्नो काममा नपुग्दा उसको अफिसमा खराब रर्ेकर्ड बन्नसक्छ र उसको कारणले सेवाग्राहीहरुले दुःख पाउनर्ुपर्दछ । कृषकले समयमा खेती गरेन भने उसको खेत बाँझै रहन सक्छ ।
समयलाई नचिन्दा उद्यमीको सारा काम चौपट भई करोडौंको नोक्सान हुनसक्छ । समयलाई मानिसले चिन्न सक्नर्ुपर्दछ र समयअनुसार गतिशील हुन सक्नर्ुपर्दछ । यही समयलाई नचिन्दा र समयको गतिस“ँगै अगाडि बढ्न नसक्दा प्रकृतिको धनी हाम्रो देश संसारको सबैभन्दा गरीव देश भएको छ, हामी गरीव देशका दुःखी जनता भएर दिन काट्नु परेको छ । जीवन र प्रकृतिको प्रवाहमय परिवर्तन गति हो ।
समयको महत्वलाई बुझ्न सकिएन र चलिएन भने प्राप्त गरिएका उपलब्धिहरु पनि खोसिने छन् । बुद्धिमान मानिस भूतकालबाट शिक्षा लिई भविष्यको सुन्दर कल्पना बोकेर वर्तमानको यथार्थमा क्रियाशील रहन्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्नेहरुले समयको महत्वलाई बुझी अगाडि बढनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
त्यसैले समयप्रतिको सचेतना नै सफलताको भर्‍याङ हो, जीवनको सार हो र कर्तव्यपथ हो । समयको महत्व बुझ्नु भनेको यथार्थवादी एवं वस्तुवादी बन्नु हो । सानोदेखि ठूलोसम्मले आ-आफ्नो स्थान र हैसियतको जिम्मेवारी ठीक-ठीक समयमा इमानदार बनी सम्पन्न गर्न सक्यौं भने मात्र सफलता चुम्न सकिन्छ ।
Up Next कस्तो हुनेछ अब केहि वर्षपछिको संसार ?
आनीबानी, खानपान, फिचर्ड
– सुदिप पोख्रेल – मदिरा संसारभर धेरै जसोले खाने गर्छन् । हाम्रो समाजमा पनि यसको प्रयोग आधुनिकताको नाममा होस् या…